Home » Featured » FilmLight wuxuu abuuraa dagaal sokeeye oo raadinaya 'Americans'
FilmLight wuxuu abuuraa dagaal sokeeye oo raadinaya 'Americans'
Lixda darajo ee HDR iyo 4K HD Ultra at Technicolor PostWorks
Sannadkii lixaad iyo kii ugu dambeeyay ee Emmy abaalmarin abaalmarin ah oo Maraykanku, oo ah mudaharaad rabsho ah oo lagu sameeyay 1980s intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa, ayaa dhawaan la dhameeyay HDR iyo 4K HD Ultra at Technicolor PostWorks ee New York. Laga soo bilaabo taxane laba, muuqaalka taxanaha la dhammeeyey ayaa ahaa masuuliyadda John Crowley, Colourist Digital, oo ka shaqeynaya nidaamka shaashadda midabka Baselight ee filimka FilmLight.
Marka laga soo tago laba jeer oo taxane ah oo 2014 ah, markii Agaasimeeye-Producer Dan Sackheim uu ku biiray Maraykanka, goolka ayaa ahaa inuu abuuro muuqaal fanaaniin ah. Barnaamijka sameeya barnaamijka ayaa sidoo kale la kulmay caqabadaha ku dhufanaya dheelitirka saxda ah ee u dhaxeeya fiirinta telefishinka ee 80s iyo casriga casriga ah ee muuqaalkoodu yahay in dhageystayaashu ay filayaan maanta oo ah lixda taxane, oo ay ku jiraan 4K HD Ultra iyo HDR. Dhammaantoodna waa in lagu gaaro miisaaniyada teleefishinka iyo saacado badan.
David Woods iyo Crystal Whelan waxay u adeegsadeen soo saarayaasha bandhigga, oo ay soo saartay Fox 21 Television Studios iyo FX Productions ee Shabakadda FX.
"Had iyo jeer waa caqabad lagu ogaanayo himilada sheekada iyo adduunyadahani waxay ku nool yihiin miisaaniyad aasaasi ah," ayuu yiri Woods. "Waxay u muuqataa in xilli kasta oo aanu kordhinay tirada sawirrada muuqaalka muuqaalka ah. Sidoo kale hammiga sheekada, waxaan samaynay intii ugu fiicneyd, sidoo kale, inaan 2018 New York u eegno sida 1987 Washington iyo Moscow. "
Marka la samaynayo bandhiga sanadaha hore ee 35 ee Washington iyo Moscow, laakiin ku toogteen meelo ku yaal New York, mid ka mid ah caqabadaha ayaa ahaa in la qariyo waxyaabihii bixina lahaa. Tani waxay noqoneysaa labo-jeer muhiim u ah HDR iyo 4K halkaas oo xoojinta xoojinta iyo faahfaahinta ay sii adkeynayaan in ay ku dhejiyaan faahfaahinta, sidaas darteed mid ka mid ah shaqooyinka Crowley waxay ahayd inay isticmaalaan qalabka sahlan ee raadinta ee Baselight ilaa maskacana dhuubo walxaha iyo cilladaha.
Xaalad kasta waxaa la dhammeeyey HD iyo SDR, iyada oo Crowley bakhaar ku dhigtay baddalaad gaaban. Wuxuu si joogto ah u daabacay liisaska go'aanada cusub ee ku jira qaabka Metadata BLG metadata, taas oo u oggolaanaysa tifaftiraha iyo kormeeraha codka inuu galo fasalada ugu dambeeyay ee Baselight AVID, fiilada Baselight ee loogu talagalay AVID Laxamiistaha Media.
"The AVID u socodka shaqada Baselight wuxuu na siiyay dabacsanaanta si loo keeno midabada ugu dambaysa iyo saameynta muuqaalka ee qolka edbinta ka hor intii aan hore u sameynay ka hor, " Crowley ayaa sharraxay. "Waxaan awoodnay inaan qiimeyno taxanaha muhiimka ah ee aan ku riixeyno xuduudaha muuqaalka ah, waxaana laga yaabaa inay soo bandhigaan sawirkii ugu dambeeyay ee waqtiga saxda ah ee tooska ah ee qolka edbinta, taas oo naga dhigtay waqti qurux badan."
Kadib marka la dhammaystiro baasaboorka SDR, Crowley ayaa markaas abuuray version HDR.
"Waxaa jiray rabitaan xooggan oo ah inaan sii wadno fekerka aan horey ugu guuleysanay muddo shan xilli ciyaareed ah HD iyo UHD, SDR iyo HDR, " ayuu yiri soo saaraha David Woods. "Waxaan ka walwalsanahay inaan sii socdo xilli ciyaareedka laakiin ugu dambeyntii, waxa ay aheyd mid cajiib ah sida ugu dhakhsaha badan iyo sida muuqata dadaal la'aanta John Crowley uu ka soo muuqday SDR HDR. Baselight waa qalabkii ugu fiicnaa ee aan arko isbedelka labadaba. "
"Hannaankani wuxuu ahaa mid aad ufiican," ku daray Crowley, "Waxaanan ka dhignay dhamaan wadahadalka shaqada oo aan wadno lahayn."
"Si aad u noqoto qayb ka mid ah bandhiga sida tan waa mid mudnaan leh," ayuu soo gabagabeeyay. "Sawir-qaadashada indhaha ah, qaab-dhismeedka aadka u saxsan, ficilada wanaagsan iyo qoraallada qibrada leh ayaa dalbaday in aan ka sarre maro cayaarteyda marxalad kasta. Waxaan dareemayaa nasiib aad uwanaagsan oo door ka ciyaaray guusha bandhigga. "
Taxanihii ugu dambeeyay ee Maraykanku wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Emmy ee jilayaasha rikoodhka ee taxanaha riwaayadaha ah oo u galay Matthew Rhys, iyo sidoo kale Abaalmarinta Emmy oo ah qoraallo qaali ah oo taxane ah oo taxane ah oo taxanaha ah oo la xidhiidha wada-jireyaasha wada jirka ah Joel Fields iyo Joe Weisberg.
FilmLight wuxuu kobciyaa nidaam darajo qiimeyn midab ah, codsiyada sawir gacmeedyada iyo qalab shaqeynaya kuwaas oo badalaya filim iyo muuqaal soo-saarka filim iyo muuqaal cusub oo tayada, kalsoonida iyo waxqabadka. Nidaamyada firfircoon ee shirkaduhu waxay shaqaaleysiiyaan alaab adag oo leh qalab wax ku ool ah, oo u oggolaanaya xirfadlayaasha hal-abuurka ah inay ka shaqeeyaan safka hore ee wareegga warbaahinta. Shirkadda 2002, Ganacsiga ugu weyn ee filimka 'FilmLight' waxa uu ku salaysan yahay cusbooneysiinta, fulinta iyo taageerada alaabteeda - oo ay ka mid yihiin Baselight, Prelight iyo Daylight-ka ah shirkadaha wax soosaaraya, xarumaha wax soo saarka iyo filimyada / TV-yada ee adduunka. FilmLight waa xarunteedu tahay London, halkaas oo cilmi-baaris, naqshadeynta iyo wax-soosaarka wax-soo-saarka la duubay. Guryaha iyo taageerada waxaa lagu qabtaa xarumaha adeega ee gobolka iyo lamaanayaasha aqoonta leh ee adduunka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.filmlight.ltd.uk
posts Latest by Caroline Shawley (arki dhan)
Imagine Communications Provides Production Flexibility and Quality in New OB Truck for tpc Switzerland - January 22, 2019
4K HD Ultra Baselight Dagaal qabow Colorist Heerka midabaynta midabada Crystal Whelan Dan Sackheim David Woods Emmy Award filmlight Fox 21 Ciyaaraha Telefishinka Shabakada FX Productions FX HDR Joe Weisberg Joel Fields John Crowley Matthew Rhys MKM Marcomms Isgaadhsiinta MKM Technicolor - PostWorks Americans The	2018-10-29
Previous: Facebook Live Series Oo Lagu Qabtay Wargeyska URSA iyo ATEM 4 M / E Studio Studio 4K
Next: Engineerka Nidaamka
Archives Select Month January 2019 (190) December 2018 (243) November 2018 (406) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (397) July 2018 (876) June 2018 (869) May 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (779) February 2018 (684) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) May 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (606) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) May 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (123) December 2015 (357) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) May 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) May 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) May 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Janaayo 22 @ 10: 00 am - Janaayo 24 @ 4: 00 pm
Tifaftiraha YouTube / Editor
Tifaftirayaasha Dijital ah